Thursday January 10, 2019 - 22:38:34 in Wararka by Mogadishu Times
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in UK ku biireyso dalalka Imaaraadka iyo Rushka, iyada oo dooneysa in ay saldhig militari ku yeelato Somaliland. Toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa markii ugu horeysay tagay xoghayaha Difaaca BritainGavin William
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in UK ku biireyso dalalka Imaaraadka iyo Rushka, iyada oo dooneysa in ay saldhig militari ku yeelato Somaliland. Toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa markii ugu horeysay tagay xoghayaha Difaaca BritainGavin Williamsonoo kulan la qaatay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyaga oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dhinac. Somaliland waxaa horey u gumeystay Boqortooyada Ingariiska, walina waxaa ay raadineysaa in ay hesho aqoonsi caalami ah kaddib markii ay ku dhawaaqday in ay go'day Soomaaliya inteeda kale.
Cumar Baashe oo ah wakiilka Somaliland ee Kenya oo arintan wax laga weydiiyay ayaa beeniyay warka ku saabsan in socdaalka xoghayaha difaaca UK uu ahaa mid salka ku haya arrimo militari, balse taa badalkeeda waxaa uu sheegay inGavin Williamson iyo madaxweyne Biixi ka wada hadleen arrimo dan u ah xiriirka Somaliland iyo Britain taasoo gacan ka geysan karta ayuu yiri in ay hello aqoonsi deg deg ah.